Hydrogen chloride - Wikipedia
hydrogen chloride redirects here
hydrogen chloride itype yegas inechemical formula HCl.Hydrochloric acid , hydrogen chloride iri mumvura inokwanisa kupiwa chemical formula HCl.
hydrogen chloride idiatomic gas inocontainer hydrogen atom neChlorine atom yakabatanidzwa necovalence bonding.Hydrogen chloride iri very soluble mumvura nemamwe mapolar solvents. kamagasi two aya akabatana akabatana nemvura anogadzira mahydronium cations H3O nemaChlorine anions Cl- through revesible reaction.
HCl + H2O = H3O + Cl-
izvi maresults acho panobuda hydrochloric acid ende iri strong acid.hydrogen chloride inoitisa ngura kana paine moisture.
kumaindustries mazhinji brine(solution of sodium chloride in water) inoitwa electrolysis pachibuda chlorine nehydrogen.
2NaCl + H2O = Cl2 + NaOH + H2
Hydrogen chloride mumalabs inokwaniswa kugadzirwa through chemical reaction. hydrogen chloride inokwanisa kubva pachemical reaction yesodium chloride nesulphuric acid.pakaitika chemical reaction panobuda hydrogen chloride segas.
NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl
reaction iyi inoitika at room temperature asi pakuproceeder kuita 400 degrees yekupisa reaction results anenge asiyana
Most Hydrogen chloride inoshandiswa pakugadzira hydrochloric acid , iri important reagant kune mamwe maindustries chemical transformation
hydrochlorination of rubber
kugadzira vinyl chlorides
inokwaniswo shandiswa kuseperater cotton from wool.inoshandiswa kugadzira malewis acids. inoshandiswa paku purify silicon semiconducter.
hydrogen inokwanisa kukuuraya nekuti yakapinda mumhino inoisa inflammation mumhino , coughing , choking, circulatory failure.Yakaenda paskin panoita patsvuku uye pachirwadza.hydrogen chloride will interact mametals but hydrochloric acid haidaro.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrogen_chloride&oldid=52691"
Last edited on 11 Mbudzi 2017, at 23:02
This page was last edited on 11 Mbudzi 2017, at 23:02.